ILuz de Maria-Intsholongwane kuphela kwesandulela-ukubala ukuya eBukumkanini
ISt NguLuz de Maria de Bonilla nge-20 kaJuni, 2020:
Nina ningoonyana bakaThixo uYise, nithandwa kakhulu nguye.
ILizwi eliNgcwele alinasiphako, ke ngoko ubuntu buqhubeka kwindlela yabo kwicala lamagama onke aphuma emlonyeni kaThixo.(cf.Nd. 19: 9; II II. 1: 20-21).
UnguBantu uhamba phakathi kobunzima ngeli xesha lukhokelwe kubuntu. Inguquko ophila ngayo ayikaze icatshangelwe yindoda yeli Xesha.
UKumkanikazi noMama wethu babekhe bakuxwayisa ukuba iintshaba ezinkulu zikaThixo ziya kuzenza zivakale luluntu, kodwa esi sizukulwana asikholwanga. Abo babekholelwa kwixa elidlulileyo kwaye ngoku sebephumile kwinkolo bayinxalenye yemeko yentlekele yoluntu, eyabizelwa enguqukweni rhoqo kodwa engathobeli, nanjengoko bengazange bathobele eSodom naseGomora (cf. Gen 19).
Ndibuye kwakhona ndizokucela Inguquko, ndijongane neentliziyo ezilukhuni ezingathambanga.
Ndizele ezi ntliziyo zelitye ezingavumeli uLizwi uvela phezulu ukuba azichukumise ukuze azive.
Igama eliDini lisuswe: litshintshiselwe igama elithi ukungakhathali -ligama eliqondakalayo kubantu abalungelelanisa noko kufunwa sisininzi, ngaphandle kokuhlalutya iziphumo zemiphefumlo yokudelela intando kaThixo.
Ezicaweni, ivumba lengcwele, ukuhlonela ubungcwele, ukuhlonela ubungcwele, belahlekile, kanye njengokuba abanye aboNikelwe kwiNkosi yethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu baye baphambuka ngokuba behlabathi kwaye bazinikela kwi-veinglory.
Ubuntu bubohlwaya buqu, buzigweba buzenzele kwaye buzidwebe engcwabeni nakwintlekele enkulu ebangelwa kukudelwa ngakuye nakwiNkosi kunye neNkosi yethu uYesu Krestu, okhoyo, okwenyani kwaye okwenyani kwi-Sacrament yeSalfure esikelelekileyo ..
ILizwi elingcwele leSibhalo esingcwele lihlanjelwe; Imiyalelo yoMthetho kaThixo ilibaleka ngokulula kwaye ilula kakhulu. Iziphumo zoku kukubandezeleka eluntwini.
Zintanda zikaThixo, Inye nesithathu, indlu kaThixo iyangcoliswa kwaye ayipheli; Abantwana bakaThixo abathembekileyo abazi ukuba mabayaphi. Abantu bakaThixo bazifumana eGetsemane ngobusuku obude kunye neNkosi yabo kunye noKumkani wabo uYesu Krestu-bekhathazekile, bebuhlungu kwaye belambile. Ukwazi ukuba besiya kwelona xesha linzima kwaye linesiqhwithi apho kuya kubakho ukungqubana ngaphakathi kuMzimba kaMystical owahluleleneyo kaKrestu, kwaye uwexuko luya kuzuza umhlaba.
Bantu bakaThixo, intsholongwane egcina uluntu luthandabuza ize njengesandulelo solingo olukhulu oluza kufikela lonke uluntu: ukutyhilwa kwehlazo lesi sizukulwana esililela abo basokolayo, abo babulawa yile ntsholongwane, kodwa bengahoyi abamsulwa abenziwa amadini rhoqo ngokuqhomfa.
Le ntsholongwane ayisosifo nje esinye, ayisiyongxaki yengqondo: le ntsholongwane ibangela ukubhubha kwabantu ngamanani amakhulu kunawe oxelelwa ngawo, kuba le iye yaba yenye indlela uMtyholi angabachaza ngayo abantu kwaye abachaze ukuba ngubani.
Isibhedlele esikhulu sakhiwe ngeentsuku ezimbalwa sineenjongo ezahlukileyo kuneso sasibonakala ngelo xesha; kungekudala ziya kusetyenziswa. Intsholongwane isasazeka kuwo wonke uMhlaba, ithatha umhlaba ngommangaliso; Kuya kubakho indlala, izizwe zinoburhalarhume, zisihla ziye ekulweni.
Indlu kaTata ikuxwayisile malunga nenye yeenjongo ze-World Order (1): ukunciphisa inani labemi behlabathi, ukanti uyayishiya le nto ingabonwa.
Enye intsholongwane iyeza kwaye iyakubatshabalalisa abantu bengaboni, ke musa ukulibala ukuba kufuneka uhlale uzilungiselele ngaphandle kokulahla oko kukhokelela kuKumkani nakwiNkosi yethu uYesu Krestu: sebenzisa iisakramente!
Ndithembe uKumkanikazi wethu kunye noMama, thandaza ngezenzo zakho ukuze unike ubungqina ngoThando lukaMama; thandaza kwiRosari eNgcwele kwaye uthandaze nomsebenzi wakho kunye nezenzo zakho.
Ububi buyabonakala ehlabathini; sukuyithatha kancinci le Ndikuzisa kuwe. Sisimemo esingxamisekileyo: imikhosi yeedemon ibambelele kwabo babamkelayo, belahla uThixo.
Amaxesha azayo ngawokubandezeleka okukhulu eluntwini, ngakumbi ngakumbi abo bala ukholo.
Ndiyalumkisa ngokubethwa kwabantu nguMtyholi.
Thandazani, bantwana bakaThixo, thandazani. Umhlaba uya kugungqiswa ngamandla.
Thandazani, bantwana bakaThixo, thandazani. Ubundlobongela bomntu buya kwanda.
Bantwana bakaThixo, kwasekuqaleni kosuku lwakho kufuneka unqule uThixo, uNye kunye nabaThathu, ngokudibeneyo kwinqanaba leengelosi. Indoda iyavavanywa kwincopho, ngelixa abantu bokholo bencedwa phakathi kwembandezelo ngelixesha ngaphambi kwesilumkiso esikhulu. (2) UThixo uvumela iZityhilelo zakhe ukuba zizalisekiswe ngendlela umntu angayilindelanga okanye ayilawule, njengoko ubusandula ukufumana ngaphakathi kweCawa.
Musa ukoyika, bamba isiqinisekiso sokuba ngabantwana bakaThixo, abantwana boKumkanikazi noMama, abantwana boThando oluNgcwele.
Ungoyiki inyani endikuzisa kuyo ivela ezulwini ukuze wazi ukuthembeka kukaThixo kubantu baKhe. Musa ukoyika: uxelelwe kwangaphambili. Hlala unyanisekile kuThixo nakwiMiyalelo yaKhe, kwaye ezinye ziya kunikwa ngaphandle koko.
Yibani ngabantwana bokwenene bakaThixo.
(1) Isityhilelo malunga nesilumkiso esikhulu: funda ...
(2) Isityhilelo malunga noMyalelo weHlabathi eNtsha: funda…
← Imiyalezo yaseMedjugorje- “fumana uxolo,…
Pedro Regis - UYesu uya ... →